Izibonelelo malunga acquisition ubunini ekunene - Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Izibonelelo malunga acquisition ubunini ekunene
Ilungelo ubunini babe sithunyelwe omnye umntu kuphela yi-umnini into okanye ngumntu onikiweyo enjalo amagunya ngokuthi umniniUmnini omtsha acquires enjalo amalungelo nezibophelelo zethu malunga transferred nto (property) njengoko kokuba owokuqala ngumnini-nto (property), ukuba imithetho kwaye isivumelwano musa stipulate ngenye indlela. I-acquirer a nto (property) acquires ubumnini ilungelo into (property) njengoko ka-mzuzu aba ngabo transferred kuye, ngaphandle kokuba imithetho okanye isivumelwano akusebenzi stipulate ngenye indlela. Nemvumelwano babe stipulate ukuba ubunini ilungelo uya kudlula kwi-acquirer kuphela emva yokugqibela baya kuba bamthwala ngaphandle a imeko esekwe kwi-zengqesho.
Ubunini ilungelo kwixesha elizayo nto, ngaphandle into ngokulawulwa ubhaliso, babe sithunyelwe nge-isivumelwano kwangaphambili.
Unikezelo a nto inika acquirer ithuba sebenzisa into transferred ngokunxulumene injongo yayo, kunye ngenxa ngokuphathelele imeko nto kwaye yayo isemthethweni isimo.
Unikezelo ngu ukuphunyezwa kwi umnini into kwi-acquirer, ngokunjalo ukuphunyezwa phezu kwe nto, kunikwa ngaphandle umsebenzi ukunikezela ukuya kuyo, uthutho inkampani ye-kweenkonzo kwi-acquirer nokunikezelwa ngeposi kwi-acquirer, ukuba imithetho kwaye isivumelwano musa ukunikezela ngokwahlukileyo.
Ukukhutshelwa a ibhili lading okanye olunye uxwebhu engqina ukuba nokungcwatywa bawo ilingana ukuba unikezelo le nto. Izinto ekubeni okhethekileyo ukungenisa kuqoqosho weriphablikhi Lithuania, uluntu okanye ukhuseleko lesizwe, okanye yezinye izizathu (zesintu, heavily poisonous*, njl. Izinto ezinjalo kwaye ukulandelelana yokufumana amaphepha-mvume kuyimfuneko ukuba bathenge nabo baya kumiselwa ngumthetho. Umngcipheko accidental kutshabalala okanye umonakalo a nto ekubeni transferred uya kudlula kwi-acquirer ngalo mzuzu ukuba lowo acquires ubumnini amalungelo, ngaphandle kokuba ngenye indlela stipulated ngumthetho okanye nge-zengqesho. Ukuba transferor iimphoso: i deadline ukuba unikezelo into okanye acquirer iimphoso: i deadline ukufumana into, umngcipheko accidental kutshabalala okanye umonakalo le nto uya kuba phezu umntu ukuba sele uphose i-deadline, ngaphandle kokuba ngenye indlela stipulated ngumthetho okanye nge-zengqesho. Isiqhamo ukuyinyamezela nge into kwaye ukwanda yezilwanyana stock belong yabo umnini ngaphandle kokuba umthetho okanye isivumelwano ukuseka ngenye indlela. Iziphumo zoqoqosho ukusebenzisa nto - imveliso okanye ingeniso - belong ukuba ngumnini-nto ngaphandle kokuba umthetho okanye isivumelwano ukuseka ngenye indlela. Xa movable izinto eziya ipropati eziliqela abanini-mhlaba ukungena ukuba ifom entsha nto kwaye akukho malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ukubuyela kwabo abo okuqala urhulumente yi-partitioning kwabo, okanye ukuba partitioning ngu fraught kunye excessive iindleko, xa abanini-mhlaba abanalo wavuma ngokukodwa phezu ukungenela izinto, entsha movable ipropati arising ivela isuka apho uya uqwalaselwe edibeneyo ipropati abantliziyo imimandla belong ukuba ngamnye co-mhlaba kwi indawo ekuyo into ukuba ixabiso kwipropati ngoko ke abaziwayo. Ukuba movable izinto belonging ukuba ezahlukeneyo abanini-mhlaba baba abaziwayo ngaphandle kwemvume kwaye ulwazi enye yezi (abanye) kwaye ukuba kukho malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ukuba ulwahlulo nabo kwaye kubuyela kubo abo okuqala urhulumente, oku kuya kwenziwa ngomhla iindleko ezinokufumaneka umntu ukuba abaziwayo kwabo. Umntu othe wenza into entsha esuka kwenye ke ezi zinto uba yayo umnini, ukuba ixabiso umsebenzi inkulu kune ixabiso ezi zinto kwaye ukuba umntu akazange kwaye ayikwazanga ukwazi ukuba ezi zinto zenza umntu ongomnye' mashishini. Kwi-elinjalo umntu othe kusetyenziswa enye ke, ezi zinto ziya recompense yayo ixabiso umnini Ukuba ixabiso imathiriyali inkulu kune ixabiso ngokulima into, ngumnini ezi zinto ziya kuba ngumnini-nto. Uya kufumana ilungelo ukugcina nto kwaye recompense ixabiso layo ukwenza, okanye renounce into kwi-idolo ye-komenzi kwaye ibango imbuyekezo ukusuka yokugqibela.
Ngamazwe Umnqophiso kwi Zasekuhlaleni kwaye Amalungelo Ezopolitiko Yamkelwa waza wavula kuba utyikityo, ukwamkelwa kwaye accession yi-Jikelele yowiso-mthetho isisombululo A (XXI) elinesithandathu disemba.
Ikhadi lebhanki letyala, Ubuqhetseba abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-China kuba Wonke Isixeko
Задолженность по вспомогательным платежам является частым случаем